USimon Bolivar kunye ne-Battle of Boyaca
I-Bolivar Stuns Ibutho laseSpeyin
Ngomhla ka-Agasti 7, 1819, uSimón Bolívar ujoyine iGeneli Jikelele u-José María Barreiro ekulweni kufuphi noMlambo iBocaca kwiColombia yangoku. Amandla aseSpeyin ayesasazeka kwaye ahlukaniswe, kwaye uBolívar wakwazi ukubulala okanye ukubamba phantse onke amaqhawe eentshaba. Kwakuyimfazwe eqinileyo yokukhululwa kweNew Granada (ngoku iColombia).
IBolivar kunye neStendence Stalemate eVenezuela
Ngasekuqaleni kwe-1819, iVenezuela yayimfazwe: Abaphathi beSpeyin kunye nePatriot kunye neentonga zempi babesilwa nommandla wonke kulo mmandla.
I-Granada entsha ibali elifaniyo: kwakukho uxolo olungathandekiyo, njengoko abantu babephathwa ngombono wensimbi nguSpanish Viceroy uJoshua de Sámano waseBotota. USimon Bolivar, omkhulu kunabo bonke abavukeli bezahlulo, wayehlala eVenezuela, ehambelana noMphathi-Jikelele waseSpeyin uPablo Morillo, kodwa wayesazi ukuba ukuba afike kwiNew Granada, iBotota yayingenakulungiswa.
IBolivar Crosses iAndes
I-Venezuela neColombia zihlukaniswe yingalo ephakamileyo yee-Andes Mountains: iinxalenye zazo akunakwenzeka. Ukususela ngoMeyi ukuya kuJulayi ka-1819, nangona kunjalo, uBolivar wahokela umkhosi wakhe ngaphaya kwePáramo de Pisba. Kwimitha engama-13 000 (i-4,000 metres), ukupasa kwakukhohlisayo kakhulu: imimoya ebhubhisayo yatshisa amathambo, iqhwa kunye neqhwa zenza unyawo olunzima, kwaye imifudlana yayifaka izilwanyana kunye namadoda ukuba awele. UBolivar walahlekelwa ngumntu wesithathu womkhosi wakhe , kodwa wayenza ecaleni lasentshonalanga ye-Andes ekuqaleni kukaJulayi, 1819: iSpanish ekuqaleni ayengazi ukuba wayekho.
IBolivar yahlanganiswa ngokukhawuleza kwaye yafumana amanye amasosha avela kubantu abafuna umdla eNew Granada. Amadoda akhe asebenzisana nombutho omdala waseSpeyin uJosé María Barreiro ekulweni kwe-Vargas Swamp ngoJulayi 25: kwaphela kumgca, kodwa wabonisa iSpanishi ukuba iBolívar ifikile ngamandla kwaye iya eBongota.
UBolivar wabuyela ngokukhawuleza edolophini yaseTunja, ukufumana izixhobo kunye nezixhobo ezazisetyenziselwa iBariro.
Amabutho eRoyalist at Battle of Boyaca
UBarreiro wayengumntu oqhelekileyo onobuchule owayenomkhosi oqeqeshiwe, onamandla omkhosi. Nangona kunjalo, amajoni amaninzi, ayebhaliswa eNew Granada kwaye ngokungathandabuzeki kwakukho abathile ababenabo bavukeli. UBarreiro wathuthela ukuya eBolivar ngaphambi kokuba afike eBotota. E-vanguard wayenamadoda angaba ngu-850 kwi-batanali ye-Numancia elungileyo kunye nama-horse-skills a-160 awaziwa njengeidononons. Kwinqanaba lomkhosi, wayenamasosha angama-1,800 kunye namanoni amathathu.
I-Battle of Boyaca iqala
Ngomhla ka-Agasti 7, uBarreiro wayefudula umkhosi wakhe, ezama ukufikelela kwindawo yokugcina iBolivar ephuma eBotota ixesha elide ngokwaneleyo ukuze kuqinisekiswe ukufika. Ngemini, i-vanguard yayingaphambili kwaye iwela umlambo kwibhulorho. Apho bahlala khona, balindele umkhosi omkhulu ukuba ufikelele. UBolívar, owayesondelene kakhulu noBariro, wayebetha. Walaya u-General Francisco de Paula Santander ukuba agcine i-elite forceard ibambe iqela ngelixa elinyanzelwe ngamandla.
Yenza ngcono nakakhulu kunokuba uBolivar wayecebile. I-Santander yagcina i-Numancia Battalion kunye ne-Dragoons ephawulwe phantsi, ngelixa iBolivar kunye no-General Anzoátegui bahlasela umkhosi omkhulu waseSpeyin othukile.
UBolívar ngokukhawuleza wajikeleza iSpanish. Ejikelezwe kwaye enqunywe kumajoni angcono emkhosini wakhe, uBarreiro wazinikela ngokukhawuleza. Yonke yaxelelwa, ii-royalists zalahlekelwa ngaphezu kwama-200 kunye nama-1,600 athathwe. Amapolisa alahlekelwe ngu-13 kunye nabangama-50 abalimele. Kwakuyintshaba ngokupheleleyo eBolívar.
Ngomkhosi kaBarreiro wachithwa, uBolívar wakhawuleza wenzelwa isixeko saseSanta fé de Bogotá, apho uViceroy Juan José de Sámano wayengumphathi waseSpain eNyakatho Melika. AbaseSpain kunye nama-royalists basemxhatshazweni baza babalekela ebusuku, bephethe konke abakwaziyo nokushiya amakhaya abo kwaye kwezinye iimeko amalungu omndeni emva. UViceroy Sámano ngokwakhe wayengumntu onobukroti owayesaba ukubuyiswa kweentlanga, ngoko ke, wasuka ngokukhawuleza, wayegqoke njengomlimi. "Abazalwana" baphanga amatsha amakhaya abo babengummelwane wabo ngaphambili kwaze kwaba yilapho iBolívar ithatha loo mzi ungancatshiswa ngo-Agasti 10, 1819 kunye nokubuyiswa komyalelo.
Ilifa leMfazwe yaseBhocaca
I-Battle of Boyacá kunye nokuthunjwa kweBototá kubangele ukuba i-Bolívar ibhekiselele kwiintshaba zakhe. Enyanisweni, i-Viceroy yayishiye ngokukhawuleza kangangokuthi wayishiya imali kwi-treasury. Emuva eVenezuela, igosa lobukhosi lobukhosi laliyiGeneral Pablo Morillo. Xa wafunda ngemfazwe kunye nokuwa kweBototá, wayesazi ukuba imbangela yobukhosi yayilahlekile. UBolívar, kunye neemali ezivela kwingqolowa yebukhosi, amawaka abantu ababesebenza eNew Granada kunye nokukhawuleza okungaqinisekiyo, ngokukhawuleza baya kuphinda babuyele eVenezuela baze batshabalalise nayiphi na iindlalifa ezilapho.
UMorillo wabhalela uKumkani, ngokukhawuleza ukuba acele amanye amabutho. Amajoni angama-20 000 ayebanjwe kwaye aya kuthunyelwa, kodwa iziganeko zaseSpanish zithintela amandla ukuba ahambe. Kunoko, uKumkani uFerdinand wathumela uMorillo incwadi ebemgunyaza ukuba axoxe kunye nabavukeli, abanikezele ngokuncinci kumgaqo-siseko omtsha. UMorillo wazi ukuba abavukeli babengenakuze bavumelane, kodwa bazama. UBolívar, ukuqonda ukuphelelwa yintsapho, yavuma ukuba i-armistice yesikhashana kodwa yayicinezela ukuhlaselwa.
Ngaphantsi kweminyaka emibini kamva, izahlulo ziya kuphinda zihlulwe yiBolívar, ngeli xesha kwi-Battle of Carabobo. Eli qhawe laphawula ukugqithiswa kokugqibela kweSpeyin enyakatho eMzantsi Melika.
I-Battle of Boyacá iye yehla kwimbali njengenye yezona zikhulu kuninzi zeBolívar. Ukunqoba okuqhaqhaqhayo, okugqibeleleyo kwaqhekeza ukuphazamiseka kwaye wanika iBolívar inzuzo engazange ilahleke.
Ukuqonda i-Pirate Treasure
IViracocha kunye neNkcazelo yoLwazi lwe-Inca
Biography kaFrancisco Pizarro
Biography kaChristopher Columbus
Uhambo Lokuqala Lwehlabathi Olutsha lukaChristopher Columbus (1492)
Iindlela Zokuthi "Ndilahlekile" Kwibudlelwane obude obude